Aflixi Bar ama Baro
Everything posted by Aflixi Bar ama Baro
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic IR 26 Nov 2017
An International Relations degree can lead to employment in the civil service or a career as an analyst or policy advisor for the numerous organisations that require IR expertise. ... Graduates in International Relations may also want to use their expertise to build a career in business, journalism, politics or activism
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Drive C 21 Nov 2017
Computer oo dhan waa hadii aysan data ku jirin, kadib aad kala qeybiso.
iskana fiiri ha iska khaldin
Partition hadii mar la create gareeyo oo uu shaqeynaayo extend lama dhihi karo, waxaa extend la dhihi karaa kaliya marka aad shirnk ku sameyso oo aad qeybso inta aadan create new volume dhihin.
xalka wuxuu noqonayaa inaad format ku sameyso, hadii ay data muhiim kugu jirin.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Kusaab san IT 19 Nov 2017
Online Free Course hadii aad google ku qorto war bixino badan ayaad arkaysaa, Aflixi kaliya waa in ardayga laga caawiyo wixi ku adkaado ee cashirada kala duwan.
Software aamin ah waxaad ka heli kartaa filehippo waa website softwares-ka laga soo dagsado.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Kusaab san IT 18 Nov 2017
aad ayaan kaaga mahadcelineynaa sida wanaagsan ee aad uga qeyb qaadaneyso Aflixi.
IT marka la dhoho wey baaxad weyntahay, waa sida aad sheegtay, qofka meesha uu ku fiicanyahay wuxuu ku ogaan karaa kaliya inaad courses online oo free ah aad qaadato kadib aad fiiriso qeybta aad ku fiicanatahay tusaale inaad online Web design, Software development, graphics, networking iwm inaad tijaabiso oo aad baarto, qeybti markaas aad waqti badan galineyso oo aad wax badan ka diyaarineyso ayaa qeybtaada ah.
Waxaan rajeynaa inaad fikir aad u wanaagsan kala dhax baxday hadalkeyga.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Tilaabooyin aad ku xalin karto marki uu problem kaa qabsado .Net Framework 4 18 Nov 2017
Haa dib ayaan u bilaawnay cilad farsamo awgeed laakin hada waa la xaliyay waana uu shaqeynayaa.
Ka qeyb qaadasho wanaagsan sidi aad awal ugu tixneed si ka balaaran ugu tixnaaw wixi aad u baahato ee su'aal ama cilmi kale soo gudbi, insha allah.
Aflixi Bar ama Baro added Ciwaanka Su'aasha in Computer Science and IT 18 Nov 2017
Qaabka ugu fudud ee aad muuqaal kala soo dagi karto Youtube
Qaabka ugu fudud ee muuqaal kala soo dagi karto Youtube
1. Marka Google Chrome, Firefox ama baidu browser soo kici
2. Markaa soo kiciso kadib waxaad gashaa video-ga aad rabto inaad soo dajisato tusaale https://www.youtube.com/watch?v=guIVY-qDNGk
3. https://www waxaad ku badashaa ss
4. marka link-ga cusub wuxuu noqonaa ssyoutube.com/watch?v=guIVY-qDNGk kadib enter dheh
5. waxaad ka doorataa cabirka aad rabto tusaale mp4 (720)
6. Ugu dambeyn download riix
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Waa Maxay Application gateway 13 Nov 2017
Erayga 'Gateway' micno ahaan wuu micno badanyahay:
Marka la joogo isgaarsiinta gateway waxaa la dhahaa barta ay isu kala gooshaan laba network oo kala duwan waana barta uu network walbo network kale uga xirmo.
Gateway wuxuu ka koobnaan karaa laba mid : qalab kaasoo aad taaban karto aadna arko karto ama protocol kaasoo aadan arki karin laakin qaabka uu u shaqeyo aad dareemi karto, protocol qalab la'aantiis ma shaqeyn karo.
Waxaan rajeynaa micnaha Gateway inaad fahantay.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic cafimaadka dalka somalia 13 Nov 2017
Ismail halkaan waxaan ku soo gudbin kartaa wixi aqoon ah oo aad bulshada la wadaageyso qodobka aad kor ku xustay boggan Aflixi laguma daabici, hadii aad xog ka heyso kusoo daabac.
Aflixi Bar ama Baro added Ciwaanka Su'aasha in Computer Science and IT 12 Nov 2017
Tilaabooyin aad ku xalin karto marki uu problem kaa qabsado .Net Framework 4
Hadii uu problem-ka error code-kaan wato uu ku qabsado " .Net Framework 4 (HRESULT 0xc8000222) "
1.Click Start > waxaad soo kiciisaa Run.
kadib cmd ku qor Enter riix
2. Shaashada kuu soo bexeyso waxaad ku qortaa commend-gaan
3. Click Start > waxaad soo kiciisaa Run
waxaad ku qortaa %windir% kadib Enter riix
Waxaa kuu soo bixi doono folders tiro badan, waxaad ka raadisaa folder-kaan SoftwareDistribution kadib rename dheh magacaan ku qor oldfolder.
4. Click Start > waxaad soo kiciisaa Run.
Shaashada kuu soo bexeyso waxaad ku qortaa commend-gaan
Hada marka dib u soo bilaaw installation-ka .net framwork ee problem-ka kaa heystay
Aflixi Bar ama Baro added Ciwaanka Su'aasha in Computer Science and IT 11 Nov 2017
Pro Evolution soccer 2016 is already playing
Right Click on the taskbar and choose task managerThe proccesses windows will appear search "Pro Evolution soccer 2017" Click on Pro Evolution soccer 2016 and click end taskthat will solve your problem
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic english 11 Nov 2017
cabdiasiis idiris amin
Link-gaan ka akhriso jawaabta su'aashada click sii halkaan ==> http://www.aflixi.com/topic/635-sidee-luqada-inglish-ka-ugu-hadli-karaa/
Aflixi Bar ama Baro added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 5 Nov 2017
Qaababka ugu fudud ee aad hankaada sare ugu qaadi karto
Inaad naftaada howl galiso
Qofka waxaa looga baahanyahay in uu juhdi badan ku bixiyo si uu uga gun gaari lahaa waxaa uu hiigsanaayo isla markaana uusan naftiisa
waxba ka reeban.
Inaad garato awooda aad leedahay
Mararka qaar waxaa dhacda in qofka uu asiga isyiraahdo maya heerkaan wali ma aadan gaarin ka joog iyadoo ay dadka la dhacsanyihiin ama
ay layaabanyihiin heerka aad gaarsiisantahay, mar walbo
Qofka mar walbo uu wax akhriyo mar walbo uu caqligiisa koro, khaasatan qisooyinka waxaa kaaga baxaya qof hebel sidee ayuu ku gaaray
heerkaas marka aad akhriso dhibta ay soo mareen waxaa kuu fududaaneyso inaad fahanto waxa ku heysta heerka ay gaarsiisanyihiin isla
markaana aadan kaligaa rafaadka soo marin.
Inaad la saaxiibto qof hamigiisa sareeyo.
Dadka hamigooda sareeyo oo aad la saaxiibto waxey ka dhigantahay in ay sameeyn kugu yeelan karaan oo dhan walbo, hadii aad qof
hamigiisa hooseeyo la saaxiibto adna sida qofkaas oo kale ayaad hoos ula dageeysaa.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic antivirus 14 Mar 2017
Wcs Waraxma Antivirus-ka 1PC waxeey ka dhigantahay 1 Computer kaliya ayaa lagu isticmaali karaa sidookale 2 PC waxey ka dhigantahay 2 computer kaliya ayaa lagu isticmaali karaa, Hadii aad rabto computers badan inaa u isticmaasho Multi Pc ama Unlimited PC dooro.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Maxay dhib keenaysaa 28 Jan 2017
Hadii si wanaagsan aad u sameeyso dhibaato kaama soo gaareeyso, laakin hadii aad isku disho weights (biro) cabirkoodu aad u culusyahay waa macquul in ay dhibaato kaasoo gaarto, kaaso qof si fiican u yaqaan.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Sidee video looga soo dajiya youtube adigoo isticmaalaya firefox (browser addons) 18 Jan 2017
Refresh dheh browser-ka ama F5 riix si calaamada download-ka kugu soo baxdo
Aflixi Bar ama Baro added Ciwaanka Su'aasha in Computer Science and IT 18 Jan 2017
4 talaabo oo aad ku ogaan karto fariin qoraaleed aad dirtay in ey gaartay qofki aad u dirtay
Mararka qaar waxaad u baahantahay inaad hesho cadeyn, sida caadiga ah qof marka aad message u dirto message-ki aad dirtay wuxuu kugu haraa qeybta messages-ka, hadii aad u baahato inaad ogaato message-ki aad dirtay inuu gaaray qofki iyo in kale Steps-kaan raac waxeyna ku shaqeeynayaan mobile-da uu ku jiro Android OS
1. Waxaad taktaa qeeybta messages-ka
2. waxaad riixda 3 dhibcood oo ku taala xaga sara ama xaga hoose waxey ku xirantahay nooca mobile-kaada kadib Settings kasii dooro.
3. Text Message (SMS) kasii dooro
4. Request delivery report check saar
marka aad check saarto Request delivery report mar walbo oo aad qoraal dirto wuxuu qoraalka saarayaa 2 calaamad oo sax ah mida 1aad waxeey ka dhigantahay message-ka dhankaada wuu ka baxay mida 2aad waxey ka dhigantahay message-ka wuu gaaray qofki aad u dirtay.
Sawirada hoose waa marka aad rabto inaad marto step-ka 2aad waa noocyada mobile-da andriod-ka lagu isticmaalo
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Fecbook 7 Jan 2017
Adaa mudan Yaxye, waan ku faraxsanahay inaan kuyara caawinay.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic drive back solution 4 Jan 2017
Drive back solution kale ma ku tijaabisay computer-ka. Waxaa laga yaabaa in drive back solution-kaas uu damage yahay.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Fecbook 1 Jan 2017
Ok message-ka uu kuu soo qoraayo halkaan maku soo qori kartaa si aan u ogaan sida saxda waxa ku heysto.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic aflixi 30 Dec 2016
Abdisamad notification-ka kuu soo dhacaya waa iska xiri kartaa link-gaan booqo http://www.aflixi.com/notifications/options/ kadib Send me news and information Check ka qaad kadib Save dheh
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic Fecbook 30 Dec 2016
Waxaa macquul ah inuu verification u baahnaa mar aaad abuuraysay oo aadan verification ku sameeynin. Verification waa in la aqoon sadaa qofka isticmaalayaa facebook wuxuuna ku weydiinayaa mobile-kaada inaad galiso markaa galiso kadib ayuu kuu so dirayaa 6 number kadib waa verified. Hadii aadan verify u dirin waxaan filayaa inuu midaa u xiray account-ka.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic cilad cumputer 30 Dec 2016
Hamdi computer-ka marka uu damaayo waa goomer ma cabaar markaa isticmaasho mise marka aad daartaba wuu damayaa.
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic microscope 27 Dec 2016
Aflixi Bar ama Baro added a post in a topic What is biology 27 Dec 2016